At 9/26/2012 08:24:00 PM No comments:
အိမ်ခြံမြေဈေး သိန်းသောင်းဂဏန်းဝန်းကျင် အထက်တွင်သာရှိသော မန္တလေးမြို့အတွင်း ဂဂ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ယခုလအတွင်း Shopping Centre ဖွင့်လှစ်ရန် မြေနေရာလိုက်လာရှာဖွေနေခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက ငြင်းဆိုပြောကြားသည်။
At 9/26/2012 08:23:00 PM No comments:
“လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနဲ့ပတ်သက်လို့ နံပါတ်တစ် လုပ်ရမှုာတော့ ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ဘာ့ကြောင့် လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူ ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လခမလုံလောက်လို့ဆိုရင် လခနဲ့လောက်အောင်လုပ်ပေးရမယ် လို့ဆိုတယ်၊အရေးကြီးဆုံးအချက် ဖြစ်တဲ့ နဂိုရှိရင်းစိတ်
At 9/26/2012 08:22:00 PM No comments:
At 9/26/2012 08:21:00 PM No comments:
At 9/26/2012 08:20:00 PM No comments:
KIA တပ်မဟာ(၂)လက်အောက်ခံ ရင်း(၁၄)မှ တပ်ကြပ်ကြီး ဂွန်ဂျာသည် အင်အား(၁၀)ဦးခန့်ဖြင့် မြစ်ကြီးနား-တနိုင်း ကားလမ်းပေါ်တွင် ဂိတ်ပြုလုပ်၍ ဖြတ်သွားသော ဆိုင်ကယ်များနဲ့ ကားများကို ရပ်တန့်ပြီး စစ်ဆေးခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းများအား ဟန်ပြလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းခံလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
At 9/26/2012 08:18:00 PM No comments:
ဆိုင်းအောင်ရွာမှ ကချင်အဖွားအိုတစ်ဦးမှ KDN သို့ ပြောပြချက်မှာ `` မနေ့ နေ့လည်က KIA တွေက ဗမာစစ်တပ်ကို
At 9/26/2012 08:17:00 PM No comments:
At 9/26/2012 08:14:00 PM No comments:
At 9/26/2012 08:12:00 PM No comments:
At 9/26/2012 08:10:00 PM No comments:
At 9/26/2012 08:08:00 PM No comments:
At 9/26/2012 08:05:00 PM No comments:
မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ဆိတ်သားလုပ်ငန်းရောင်းချ လုပ်ကိုင်သူအချို့သည် စည်ပင်သာယာ ဌာနရှိ သားသတ်အုပ်ဆိုသူနှင့် ပူးပေါင်းကာ နွားပေါက်ငယ်များအား သတ်ဖြတ်လျက် ဆိတ်သားအ ဖြစ်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း မြ၀တီရပ်ကွက်ရှိ သားသတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ နွားမေတ္တာစာကြောင့် မုံရွာဒေသခံအချိုးက အမဲသား လုံးဝမစားကြပါဘူး။ အခုလို ဆိတ်သားဆိုပြီး အမဲသားတွေရောနှောရောင်းချနေခြင်းဟာ ဘာသာတရားအရ အမှားအယွင်းတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု လယ်တီကျောင်း တိုက်မှ သံဃာတော်တစ်ပါးက
At 9/26/2012 08:03:00 PM No comments:
"ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ ၀က်ဝံကျးရွာ၊ ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး၊ သက္ကံချိန်ကျေးရွာတွေမှာ ဒီလ ၂၄. ၂၅. ၂၆ ရက်နေ့တွေမှာ စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တော့ ဒီမှာလည်း လယ်ယာမြေတော်တော်များများ သိမ်းဆည်း ခံထားရတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။"ဟု လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှု စုံစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ(၄)မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
At 9/26/2012 08:01:00 PM No comments:
အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ကွမ်းတံတွေး ထွေးသည့်ဖြစ်ရပ်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အမျိုသားယဉ်ကျေးမှုအပါအ၀င် စည်းကမ်းရှိမှုနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
At 9/26/2012 07:58:00 PM No comments:
သမိုင်းပြတိုက်ဝင်း(Historical Park)အဖြစ် ပြုလုပ်မည့် ပုဂံမြို့ဟောင်းနန်းတော်ရာအထဲတွင် စားသောက်ဆိုင်နှင့် ရိုးရာအနှိပ်ခန်းများထည့်သွင်းရန် ဆောက်လုပ်မည့်ကုမ္ပဏီက စီစဉ်နေသည့်အပေါ်တွင် ဒေသခံများနှင့် လူမှုအရေး အဖွဲ့အစည်းများက လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
At 9/26/2012 07:56:00 PM No comments:
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် ရခိုင်နယ်စပ်ဒေသနှင့် တရားမ၀င်ခိုးဝင်သူ များရှိနေပါ၍ပင်လယ်ြ
ပင်နှင့် နယ်စပ်အား လုံခြုံရေးကို အခိုင်အမာတည်ဆောက်ပေးပါရန်။
၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နည်းပါးနေသည့်ရခိုင်လူဦးရေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန် ရခိုင်ဒေသတွင် စီးပွါးရေးဇုံများကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နိုင်ငံတော်မှအပြည့်အ၀ ကူညီပေးရန်။
At 9/26/2012 07:54:00 PM No comments:
၂၆၊၉၊၂ဝ၁၂ နေ့လည် ၁း၁၅ မှ ၃း၄၅ အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အစည်းဝေးခန်းမ တွင်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊တိုင်းဒေသကြီးေ ရွးေ ကာက် ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကို၊အဖွဲ့ဝင် ဦးချစ်နိုင်၊ဦးခင်မောင်ထွန်း၊ဦးကျော်၊ဦးရဲမြင့် ။
At 9/26/2012 07:48:00 PM No comments:
၂ဝ၁၂၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၆။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ယိမ်း ယိုင်နေပြီး မန္တလေးမြို့တွင် ပြိုကျ သွားပြီဟု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဝင် ဦးသိန်းညွန့်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးရှေ့ တွင သတင်းမီဒီယာများကို ပြော ကြားခဲ့သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေးကော်မတီမှ ကော်မတီဝင် ၅ ဦးသည် တရားရေးအဖွဲ့အစည်း များမှ တရားဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင် ပြုမှု ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် နှိုးဆော်ခြင်း၊
At 9/26/2012 07:39:00 PM No comments:
မြန်မာ့ အပြောင်းအလဲ အတွက် အင်တိုက်အားတိုက် စည်းရုံးနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောချက်ကို အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေက စိတ်ပါဝင်စားကြတယ် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
At 9/26/2012 05:51:00 PM No comments:
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ၂၀၁၁ ခု ဩဂုတ်လထဲ ပထမဆုံးအကြိမ် နေပြည်တော်သမ္မတရုံးမှာ စတွေ့ပြီး ဓာတ်ပုံထွက်လာတော့ လူတွေက ပျော်ကြတယ်။ မြန်မာပြည် ရှေ့ရေး ကောင်းလာတော့မယ် ပေါ့။
တကယ်လည်း အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ။
At 9/26/2012 05:48:00 PM No comments:
At 9/26/2012 05:46:00 PM No comments:
“လူငယ်အချိန်မှာ ခွန်အားများကို အားကိုးလျက် ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာကို ဇွတ်လုပ်ချင်တဲ့ မာန်၊ ရန်ကိုရန်ချင်း တုံ့ပြန်ချင်တဲ့ သဘော၊ ကိုယ့်လူမျိုးမှ ကိုယ့်လူမျိုး အစွန်းရောက်တဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်၊ အားလုံးအတွက် ပေးဆပ်ရမှာကတော့ သေဒဏ်နှင့် ၂၄ နှစ်ပင် ဖြစ်တော့သည်” ယင်းစာစုပါ ဆောင်းပါးလေးအား တစ်ချိန်က ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KIA)၏ ကွန်မန်ဒိုဟောင်း ကိုလဖိုင်ဇော်ဆိုင်းတစ်ယောက် ထောင်တွင်း၌ရှိနေစဉ် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
At 9/26/2012 05:45:00 PM No comments:
နေပြည်တော်တွင် အဆင့်မြင့် ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာ၌ နိုင်ငံတကာက တက်ရောက်လာမည့် ကိုယ်စားလှယ်များ တည်းခိုနိုင်ရန် နေပြည်တော် ဟိုတယ်တိုင်းတွင် Presidential Suite (အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သီးသန့် အခန်း) အခန်း စုစုပေါင်း ၂၁စုံ ကို တည်ဆောက်ပြီး ဟိုတယ်နှင့် တည်ဆောက်ဆဲ ဟိုတယ်များ အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်ရန် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်က ပြောကြားသည်။
At 9/26/2012 05:01:00 PM No comments:
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်လာကြောင်း
အမေရိကန် အခြေစိုက် Freedoom House ၏ ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်သည့် “Freedom on the Net 2012”တွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
At 9/26/2012 05:00:00 PM No comments:
At 9/26/2012 04:59:00 PM No comments:
ဒီအချိန်က သူတို့ဘဝအတွက် အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဟု အီလက်ထ ရောနစ်Show Room သာ တစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်သော အသက် ၂၇ နှစ်ရှိ ကိုမိုးကျော်(အမည်လွှဲ)က ပြော သည်။ နောက်လဆိုလျှင် တိုက်ခန်း ငှားထားသည့် ခြောက်လစာချုပ် ပြည့်ပြီ။ ဆက်ငှားလိုပါကမူလဈေး ခြောက်သောင်းမရတော့။ တစ် သောင်းတိုးကာ ခုနစ်သောင်းပေး နိုင်လျှင် ဆက်ငှားမည်ဟု ပိုင်ရှင်က ရာဇသံထုတ်ထားသည်။ တစ်ပူပေါ် တစ်ပူဆင့်ပြန်သည်က တစ်နှစ်နီးပါး။ သူတို့လင်မယားနှင့်အတူ စပ်ပေါင်း ငှားနေသော လင်မယားက သီးခြား ခွဲနေတော့မည့်အကြောင်း ဆိုင်း မဆင့်ဗုံမပါ ကြေညာသည်။
At 9/26/2012 01:29:00 PM No comments:
At 9/26/2012 01:27:00 PM No comments:
At 9/26/2012 12:21:00 PM No comments:
At 9/26/2012 12:08:00 PM No comments:
At 9/26/2012 11:22:00 AM No comments:
At 9/26/2012 11:21:00 AM No comments:
At 9/26/2012 11:19:00 AM No comments:
At 9/26/2012 11:17:00 AM No comments:
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ အသက် ၆၇ ကျော်လို့ အသက် ၆၈ နှစ်တွင်း ချင်းနင်းဝင်ရောက်နေပေမယ့်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ သွားတာလာတာမှာ မီဒီယာသမားတွေတောင် ဖမ်းရခက်လောက်အောင် မြှားတစင်းလို သွက်လက်လွန်းလှပါတယ်။ တခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားလို သွက်လက်ချက်ချာစွာနဲ့ အဆင့်တန်းမြင့်စွာ ပြောဆိုနိုင်တာမို့ အင်္ဂလိပ်စကားတတ်သူ လူကြီး/လူငယ်မရွေး ပွဲကျနှစ်ခြိုက်ကြပြီး ကြားသိပြီး ခင်မင်နေသူတွေက မြင်တွေပြီးနောက်မှာ ပိုသဘောကျသွားကြပါတယ်။ တခုပဲ ရှိတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနားနေတွေက မီဒီယာတွေနဲ့ စိတ်ရှည်၊ သည်းခံမှု/ ရင်းနှီးမှုမှာ
At 9/26/2012 11:16:00 AM No comments:
At 9/26/2012 11:13:00 AM 1 comment:
ပြည်တွင်း၌ I Phone5မှာ ငါးသိန်းနှင့် နှစ်သိန်းတန် GSM ဆင်းကတ်များဖြင့်သာ သုံးစွဲရန် အဆင်ပြေပြီး ယခင်(၁၅)သိန်း GSM များဖြင့် သုံးစွဲ၍ မရနိုင်ဘဲ ဆင်းကတ်လဲလှယ်ရန် လိုအပ် မည်ဟု
At 9/26/2012 11:12:00 AM No comments:
(၆၇)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ သို့တက်ရောက်ရန် အတွက် ပြည် ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် သည် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ တွင် နယူးယောက်သို့ ရောက်ရှိ သည်။ အစီအစဉ်အရ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးသည် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၌ မိန့် ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ တွင် အီရန်သမ္မတ အာမက်ဒီနီ ဂျက်၊ အီဂျစ်သမ္မတမော်စီတို့ မိန့် ခွန်းပြောကြားကြမည်ဟု သိရ သည်။
At 9/26/2012 11:11:00 AM No comments:
“ကျွန်တော်တို့ ရွှေရင်အေးရွာကအပြန် ညောင်ချောင်းရွာ (မောင်တောမြို့နယ်)မှာ တစ်နာရီလောက် ကားရပ်ပြီး ကိုကိုကြီး
At 9/26/2012 11:10:00 AM No comments:
At 9/26/2012 11:08:00 AM No comments:
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအား စွပ်စွဲပြစ်တင်မည်
အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပေါ် စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုလ ၂၄ ရက်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် အထူးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဆင့်ကပြောသည်။
At 9/26/2012 11:06:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း CNN သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျမှုသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က အရပ်သားများကို ပေးအပ်သည့် ဆုများအနက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် Congressional Gold Medal ဆုကို လက်ခံရယူရန် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိနေ စဉ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က CNN နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
At 9/26/2012 11:05:00 AM No comments:
At 9/26/2012 11:03:00 AM No comments:
At 9/26/2012 11:02:00 AM No comments:
ထူးခြားသော သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ခန့် သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သည့် သုံးလေးလခန့်က စဉ်းစားကြည့်လျှင်ပင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်း သည်ပြောနိုင်သည်။ သို့သော် ယင်းသည် စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်ညတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။တိတိကျကျဆိုရသော် ထိုနေ့ည ရှစ်နာရီ ရုပ်မြင်သံကြား သတင်း တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
At 9/26/2012 10:59:00 AM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့ရှိ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ပြုလုပ်ပေးရာတွင် လိုင်စင်ဖိုးအပြင် ဆိုင်ကယ်စောင့် ခနှင့် နေရာဝယ်ယူခများပြားနေသည့်အတွက် အခြေခံလူတန်းစားများအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ပြုလုပ်ရန် အခက်တွေ့နေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
At 9/26/2012 10:57:00 AM No comments:
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-DKBA ၏ မတော်တဆ ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် ထီးသဲလယ်ရွာသားတဦး ညာဘက်ခြေသလုံး တွင် ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သည်။
At 9/26/2012 10:54:00 AM No comments:
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောက်ရှိနေသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမားတို့သည် ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ ခရီးစဉ် အနေအထားများအရ တွေ့ဆုံရန် အခြေအနေ မရှိတော့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်က ပြောကြားကြောင်း
BBC Burmeseသတင်းဌာန၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ရေးသားဖော်ပြသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း BBC Burmese က ဆက်လက် ဖော်ပြသည်။
At 9/26/2012 10:50:00 AM No comments:
At 9/26/2012 10:48:00 AM No comments:
At 9/26/2012 08:29:00 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်တာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ ရင်းရင်းနီးနီး ကြိုဆိုဖို့ ပြင်နေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ ၁၅ မိနစ်ကြာ ရင်းနှီး နွေးထွေး စွာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘီဘီစီက တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးကြည့်တော့ ``သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်`` လို့ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုတိုတုတ်တုတ် ဖြေကြားသွားပါတယ်)။
At 9/26/2012 08:17:00 AM No comments:
At 9/26/2012 08:11:00 AM No comments: